छक्का पञ्जा-२ लाई यु सर्टिफिकेट फूलपातीमा एक्लै आउने - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
०७ असोज २०७४ | Gufgaf.com
काठमाण्डौ असोज ७ । यस बर्षको बहुप्रतिक्षीत चलचित्र छक्का पञ्जा २ले युनिभर्सल सर्टिफिकेट पाएको छ । सेन्सर बोर्डले सिनेमालाई यु सर्टिफिकेट दिएको हो । सेन्सर पास पछि प्रतिकृया दिदै निर्देशक दिपाश्री निरौलाले सिनेमाले यु सर्टिफिकेट पाएकोमा खुशी ब्यक्त गर्दै दर्शकको अपार माया र साथ पाइरहने बताइन । बोर्डका एक सदस्यले चलचित्र पहिले भन्दा अझै उत्कृष्ट र फरक बनाएको भन्दै दिपालाई बधाई समेत दिएका छन । असोज ११ मा प्रदर्शनमा आउने छक्का पञ्जा २ का दुबै गीत र ट्र्ेलरले दर्शकको अपार माया र साथ पाइसकेका छन । करोड क्लव र ट्रेण्डिङमा रहेका छक्का पञ्जाका गीत र ट्रेलर मात्र हैन नेपाली सिनेमाको ईतिहासमा सायद पहिलो पटक प्रचारका लागि तयार पारीएको जिंगल समेत छोटो समयमा झण्डै १० लाख दर्शकको दर्शकको माया बटुल्दै लगातार एक साता सम्म ट्रेण्डिङमा रहयो । गीत रिलिज देखिनै बिवादमा पारिएको चलचित्र छक्का पञ्जा २ दुईको प्रदर्शन मिति सिनेमा सुरु हुने बेला देखि नै असोज ११ लाई तोकिएको थियो । यो बीचमा मंलगलम पनि असोज ११ मा प्रदर्शनमा ल्याउने भनेर प्रचार गरिए पनि सहमतिमै उक्त सिनेमाको रिलिजलाई मंगलम टिमले पर सारेको छ । केहि दिन पहिले मेरो पैसा खोइको प्रदर्शनको मिति पनि असोज ११लाई तोकिएपनि सिनेमाको प्राबिधिक काम हुदै गरेकाले अबको ४ दिन भित्र सबै काम सकेर प्रदर्शनमा आउने सम्भावना न्युन देखिएको छ । त्यसै कारण छक्का पञ्जा २ नै फूलपातीमा एक्लै हलमा आउने सम्भावना निश्चित जस्तो भएको निर्माता समेत रहेका सञ्चारकर्मी दिपेन्द्र खनियाले जानकारी दिएका छन । यसैबीच छक्का पञ्जा दुईको प्रचारका लागि तयार गरिएको गीति जिंगल सरर हुई लाई पनि सिनेमामा समाबेश गरिएको छ । रेडियो अडियोले निर्माण गरेको उक्त जिंगलमा लोकराज अधिकारीले शब्द लेखेका हुन । टंक बुढाथोकीको संगीत रहेको १ मिनेट भन्दा बढिको गीति जिंगलमा दिपाश्री निरौला, जितु नेपाल, केदार घिमिरेको स्वर रहेको छ । यो गीतलाई सिनेमाको अन्तमा राखिएको निर्देशक निरौलाले जानकारी दिइन । छक्का पञ्जा २ मा दीपक राज गिरी, प्रियंका कार्की, केदार घिमिरे, जितु नेपाल, वर्षा राउत, स्वस्तीमा खड्का शिवहरि पौड्याल, किरण केसी राजाराम पौडेल, लक्ष्मी गिरी ,लगायतका कलाकारहरु मुख्य भूमिकामा छन् ।
काठमाण्डौ मंसिर २४ ■ अभिनेत्री रीमा विश्वकर्माले विवाहको दुई वर्षमा सम्बन्ध बिच्छेद गरेकी छिन् । दुई वर्ष अगाडि काठमाण्डौको होटेल हायात..
२ रुपैयाँको सिक्वेल ५ रुपैयाँ बन्ने ?
निलुलाई श्रदान्जली दिने सिने कर्मीको भिड
प्रियंकासँग बेड सिन दिँदा कति टेक खानु भयो ? भन्दा यसो भने लाल्टिन नायकले
अनमोलको नाममा झुटको खेती भएकै हो त ?
छबीसँग विहे गर्न आँटेकी शिल्पा भन्छीन्–छबिको रेखासँग औपचारिक विवाह भए जस्तो मलाई लाग्दैन